Fumana ukuthandwa okungakumbi kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Fumana ukuthandwa okungakumbi kwi-Instagram
Disemba 28, 2018 0 IiCententarios 1181
Iingcebiso ze5 zokufumana ukuthandwa okungakumbi kwi-Instagram
Sebenzisa ii-hashtag ezidumileyo
IiHashtag zibonelela ngendlela elungileyo yokufumana ukuthanda Instagram kwiifoto zakho IiHashtags zinokusekelwa kumxholo, isitayile sokufota okanye ukuhambisa, izihluzi ze Instagram, indawo okanye ukusetyenziswa kwayo. Unokukhetha enye yeebhukumaka ezidla ngokusetyenziswa, ezinjenge #photooftheday, #instagood okanye #tiger. Jonga ii hashtag ezisetyenziswa ngabanye abasebenzisi ukufumana ukuthandwa okungakumbi kwi-Instagram. Ukuba ucinga ukongeza ezi tag kwifowuni yakho kunzima, ungathumela ifoto yakho kwifowuni. Emva koko, usebenzisa i-Instagram's based interface, kopisha kwaye uncamathisele ii-hashtag zedrafti kwi-imeyile yakho, uxwebhu olugciniweyo okanye usebenzise iTagstagram.
Thatha inxaxheba kwimisebenzi yoluntu.
Imisebenzi emininzi ye-Instagram kwimithombo yeendaba ezentlalo ibonelela ngeendlela zokuthatha inxaxheba. Enye yezona zinto zinkulu ezenziwa eluntwini mhlawumbi yiforum kaJJ yemihla ngemihla eqalwe nguJosh Johnson, umsebenzisi we-Instagram onabalandeli abaphantse babe ngama-280,000. Ngamawaka amalungu, iforum yakhe iye yanda ukuza kuthi ga ngoku kubandakanya inethiwekhi yabahleli abasebenzelayo gqamisa imifanekiso yonke imihla Ukuthatha inxaxheba, landela uJosh Johnson, fumana umxholo wosuku kwaye uthumele iifoto zakho. Imixholo ngokubanzi isekwe kwisitayile okanye kumxholo, omnyama nomhlophe okanye ukubonakalisa. Olunye uluntu lwe-Instagram lubandakanya i-Steetphoto bw, iFotooftheday, i-Ampt, i-EyeEm kunye nabanye abaninzi.
Nika kwaye uthathe
Into ebaluleke kakhulu kwimpumelelo kwi-Instagram kukuzinikela, njengawo nawuphi na umphakathi okanye inethiwekhi yoluntu. Okukhona uchitha kwaye unxibelelana namanye amalungu, kokukhona baya kwenza okufanayo nakuwe kwaye bafumane ukuthandwa ngakumbi kwi-Instagram.. Njengeefoto zabanye kwaye ushiye izimvo ezicingayo ukufumana ingqalelo yakho. Ukujonga ngakumbi iifoto zabantu abangaphandle kweqela labahlobo bakho kuya kukunika ukuthandwa ngakumbi kwaye abalandeli. Emva koko, abahlobo bakho baya kuqaphela kwaye inethiwekhi yakho iya kwanda ngokukhawuleza. Khetha iifoto ozithandayo, kuba kufanelekile ukunxibelelana nabasebenzisi be-Instagram abanomdla kwiintlobo ezifanayo nefoto.
Yila ngokuhlelwa kwemifanekiso
Unokufuna ukuzama iifilitha ze-Instagram, kodwa ungayeki apho. Nangona ziyinto emangalisayo, kukho ukhetho olungenamkhawulo kunye ne-Android kunye nezicelo ze-iOS zabathwebuli beefowuni abanomdla. Sebenzisa iAdobe Photoshop Express okanye Sn Snake ukuhlela iifoto, okanye iPicCollage okanye iFuzel, usetyenziso lokuyila elikuvumela ukuba uvelise iikholaji ezimangalisayo. Yenza isitayile sakho sokutyikitya kwaye ungeze uphawu lwakho kwimifanekiso yakho. Nje ukuba usungule i-niche yakho okanye isitayile esahlukileyo, iya kuqatshelwa ngokulula ngakumbi kwaye kungekudala siza kwakha inani elikhulu labalandeli.
Ngexesha avele kwi-Instagram Kunzima kakhulu, oku kunokwenza amawaka abalandeli ngosuku olunye. I-Instagram ayichazanga umgaqo-nkqubo okanye imigaqo-nkqubo yokukhetha abasebenzisi kuluhlu lomsebenzisi olucetyiswayo. Ukuba ukhethiwe, uya kuhlala iveki yonke, eya kukunika ukubonakaliswa okukhulu kunxibelelwano lwentlalo kwaye ke ufumane ukuthandwa ngakumbi kwi-Instagram. Ukuba awulwazi uluhlu lwabasebenzisi abacetyiswayo, ungalujonga kuseto: fumana kwaye umeme abasebenzisi abacetyiswe ngabahlobo. Uluhlu luyehluka ngokungafaniyo kwaye unokulufaka kumbono onomdla, isitayile esahlukileyo, okanye i-niche yakho.
1 Iingcebiso ze5 zokufumana ukuthandwa okungakumbi kwi-Instagram
1.1 Sebenzisa ii-hashtag ezidumileyo
1.2 Thatha inxaxheba kwimisebenzi yoluntu.
1.3 Nika kwaye uthathe
1.4 Yila ngokuhlelwa kwemifanekiso
1.5 Jonga kwi-Instagram
Ukusetyenziswa kwamandla e-Instagram kunye nemifanekiso ukwakha uluhlu lwabalandeli oluqinileyo
Eyona nto ifanelekileyo yeefoto ze5 zamashishini amancinci